Tigreegu ma waxay doonayaan iney ka go’aan dalka Itoobiya? | Xaysimo
Home War Tigreegu ma waxay doonayaan iney ka go’aan dalka Itoobiya?
Tigreegu ma waxay doonayaan iney ka go’aan dalka Itoobiya?
Makonnin Fiseha oo jaamacadda Maqale ka dhiga culuunta sharciga oo ka hadlay qoraalka wargeyska ayaa sheegay “wargeyska waxaa iska leh xisbiga TPLF waxaana lagu soo saaraa mowqifka siyaasadeed ee xisbigaasi marka qoraalkaasi sawirka uu bixinayo kama sii hordhacayo, laakiin waxaan sheegi karaa iney arrinin jirto.”
Qoraalkana inta aan wargeyska ‘Wayin’ lagu soo daabicin ka horna waxaa hadalkaasi marar badan laga maqlayey dadka deegaankaasi u ololeeya, aqoonyahannada deegaanka oo dareen noocaasi muujinayey.
Mr Makonnin waxaa kale uu leeyahay TPLF ma doonayo deegaanka Tigreega inuu ka gooyo dalka Itoobiya lama dhihi karo, oo waxay marar badan sheegeen in tallaabbadaasi ay jiraan arrima badan oo ku qasbi karo, hase yeeshee taasi ma aha mid ay TPLF keligeed go’aan ka gaareyso.
Mar uu wariyaha weydiiyey ka aqoonyahan ahaan mowqifkiisa gooni-isu-taagga tigreega wuxuu sheegay ‘Shacabka Tigreega inuu doonayo inuu ka sii mid ahaado Itoobiyada weyn’.
“Hase ahaatee, shacab intee le’eg oo deegaanka Tigreega u dhashay ayaa doonaya gooni-isu-taag waxay u baahan tahay darasad dheer”, ayuu yiri.
Shirki golaha dhexe uu Xisbiga EPRDF oo ay Tigreegu ka midka tahay laguna go’aaminayey masiirka xisbiga TPLF kama qayb gelin iyaga oo horayna u sii sheegay iney shirkaasi ka qayb geli doonin.
TPLF waxay marar badan bayaanna ka soo baxay uu ku sheegay go’aannada ka soo baxa dowladda/EPRDF inuusan siyaaba kala duwan u aqbaleyn, taasoo muujineyso kala duwananaasha siyaasadeed ee xisbiga uu qabo.
Astaanta xisbiga TPLF
Arrinta mideynta xisbiga EPRDF oo ahayd mid bilooyin la hadal hayey ayaa waxaa lagu wadaa inuu xisbiga la midoobo xisbiyada 5-ta oo bahwadaagta la ahaa sida Soomaalida, Cafarta, Gaambeella, Benishaangul iyo Hararida, waxayna arrintan guddiga fulintu sheegeen inay go’aan ka gaareen maalintii shalay.
Kaddibna go’aankaasi waxaa loo sii gudbinayaa golaha guud ee xisbiga oo ay tiradiisu aadka u badan tahay halkaasi ayaana lagu soo afmeerayaa go’aanka midnimada xisbiga oo lagu ogaanayaa go’aanka inuu meel marayo in kale.